ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် | ရေရှည်တည်တံ့ရေး | Samsung Myanmar
ကမ္ဘာအနှံ့ရှိ ကော်ပိုရိတ် နိုင်ငံသားတစ်ဦးအဖြစ် ကျွန်ုပ်တို့က ဆန်းသစ်တီထွင်မှုရှိသော ထုတ်ကုန်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို ပေးအပ်နေစဉ် အပြုသဘော သက်ရောက်မှု ဖန်တီးရန် ကြိုးပမ်းပါသည်
ကျွန်ုပ်တို့၏ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေး ဗျူဟာများနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လျော်ညီသော နည်းလမ်းများက ပို၍ ရေရှည်တည်တံ့သော အနာဂတ်သို့ ဦးတည်စေပါသည်
PlanetFirst- ကမ္ဘာမြေကြီးသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦးစားပေးအရာဖြစ်ပါသည်
ဒေသန္တရ လူမှုအသိုက်အဝန်းများကို ပံ့ပိုးရန်နှင့် မျိုးဆက်သစ် ဆန်းသစ်တီထွင်သူများအတွက် အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီးရန် နည်းပညာနှင့် ရင်းမြစ်များကို အသုံးပြုပါသည်
မျိုးဆက်သစ်တို့က ၎င်းတို့၏ အင်အားအပြည့်ဖြင့် ပွင့်အန်ထွက်လာစေရန် လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာပေးခြင်း
ကျန်းမာရေးနှင့်ညီသော ဒစ်ဂျစ်တယ် နေထိုင်မှုပုံစံအတွက် ကိရိယာများနှင့် ရင်းမြစ်များဖြင့် နည်းပညာကို အကောင်းဆုံး အသုံးချပါ
အားလုံးအတွက် ဒစ်ဂျစ်တယ် ဘေးကင်းရေးနှင့် ပြည့်စုံကြွယ်ဝရေးဆီသို့ ကျွန်ုပ်တို့၏ ကတိကဝတ်
ကျွန်ုပ်တို့က လူအများ၏ လွတ်လပ်ခွင့်နှင့် အခြေခံ အခွင့်အရေးများကို လေးစားပါသည်
ကျွန်ုပ်တို့သည် မတူကွဲပြားသော နောက်ခံအကြောင်းများနှင့် အမြင်များကို တန်ဖိုးထားသည့် မတူကွဲပြားပြီး စုံလင်ပါဝင်သော အလုပ်ခွင်ကို တည်ဆောက်ရန် ကတိပြုပါသည်
ပိုကောင်းသော အနာဂတ်ကို ဖန်တီးရန် မတူကွဲပြားသော အစဉ်အလာတစ်ခုကို အားပေးမြှင့်တင်ခြင်း
ကျွန်ုပ်တို့၏ ပေးသွင်းသူများနှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆက်ဆံရေးများသည် မျှတမှုနှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုအပေါ် အခြေခံပါသည်။ ကျင့်ဝတ်နှင့်ညီပြီး ရေရှည်တည်တံ့သော ပေးသွင်းမှုကွင်းဆက်ကို တည်ဆောက်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ အတူတကွ လုပ်ဆောင်ပါသည်။
ရေရှည်တည်တံ့မှုသို့ ကျွန်ုပ်တို့၏ ချဉ်းကပ်မှု
ပါဝင်ပတ်သက်သူများ (သုံးစွဲသူများ၊ ရှယ်ယာရှင်များနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၊ ဝန်ထမ်းများ၊ ပေးသွင်းသူများ၊ ဒေသန္တရ ကော်မတီများ၊ NGO များ၊ အစိုးရများ၊ မီဒီယာ၊ ပညာရှင်ဆန်သော အဖွဲ့အစည်းများ၊ အစရှိသည်တို့) အပေါ် သက်ရောက်မှုကို စီမံခန့်ခွဲပါ
ထုတ်ကုန်များ • သုံးစွဲသူများ
Samsung ရေရှည်တည်တံ့ရေး၏ တန်ဖိုး
မပြောင်းလဲသော ဆန်းသစ်တီထွင်မှုအတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကတိကဝတ် နှင့် တိုးတက်မှု
အကျိုးအမြတ်များနှင့် ရှယ်ယာရှင် တန်ဖိုးများကို အများဆုံးမြှင့်တင်ပါ (ထုတ်ကုန်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ ဆန်းသစ်တီထွင်မှု)
ဆန်းသစ်တီထွင်သော နည်းပညာများနှင့် ထုတ်ကုန်များ ဖန်တီးရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများက အကျိုးအမြတ်များ ထုတ်ပေးသည့် လမ်းကြောင်းသို့ လမ်းခင်းပေးပြီး တိုးတက်ရေး စေ့ဆော်မှုအသစ်များကို သေချာစေပါသည်။ ပွင့်လင်းသော ဆန်းသစ်တီထွင်မှုကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန် ပြင်ပရင်းမြစ်များ အသုံးပြုမှုဖြင့် စုပေါင်းညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုများ ဖန်တီးနေစဉ် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကော်ပိုရိတ် အစဉ်အလာ၏ အဖွဲ့အစည်းအတွင်းသို့ ဆန်းသစ်တီထွင်မှုကို မြှုပ်သွင်းရန် ကြိုးပမ်းပါသည်။ ထိုသို့လုပ်ခြင်းဖြင့်၊ ယနေ့ခေတ်၏ လျင်မြန်စွာ ပြောင်းလဲနေသော စျေးကွက် လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်တင်းပေးသည့် ဆန်းသစ်တီထွင်မှုရှိသော ထုတ်ကုန်များကို ဖန်တီးရန် ဂေဟစနစ် တည်ဆောက်ဖို့ တိုးမြှင့်လုပ်ဆောင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် အားလုံးအတွက် ပို၍ရေရှည်တည်တံ့သော ကမ္ဘာကြီးဖြစ်လာစေရန် လုပ်ကိုင်နေပါသည်
ရေရှည်တည်တံ့သော လူအဖွဲ့အစည်းကို အထောက်အပံ့ပြုပါ (UN SDGs အောင်မြင်စွာရယူခြင်း)
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ကော်ပိုရိတ် နိုင်ငံသားအဖြစ်၊ UN ရေရှည်တည်တံ့သော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ရည်မှန်းချက်များ (SDGs) နှင့် ကိုက်ညီသည့် နည်းလမ်းဖြင့် လူမှုရေး တန်ဖိုးများကို ဖန်တီးပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်မှုနှင့် အထူး သက်ဆိုင်သည့် ရည်မှန်းချက်များကို အထူးသဖြင့် အတိအကျဖော်ထုတ်ထားပြီး အဆိုပါ ရည်မှန်းချက်များ ပြည့်မီအောင်လုပ်ရာတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ အပျက်သဘော/အပြုသဘော သက်ရောက်မှုကို ပိုင်းခြားစိစစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် ကျွန်ုပ်တို့သည် UN SDGs ပြည့်မီရေးကို ဖြည့်ဆည်းပေးသည့် စီးပွားရေး အခွင့်အလမ်းများကို ရှာဖွေပြီး အပြည့်အဝ လေ့လာပါမည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ သတင်းပေးပို့ချက်များနှင့် မူဝါဒများကို ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲပါ
လူမှုရေးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ တာဝန်ယူမှုအတွက် မျှော်မှန်းချက်များ တိုးမြှင့်နေသည့်ကြားတွင် ကော်ပိုရိတ် စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် ရေရှည်တည်တံ့သော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ပေါင်းစည်းခြင်းသည် စီးပွားရေး လောကတွင် ပို၍အရေးကြီးလာသည့် စိန်ခေါ်မှု တစ်ခု ဖြစ်လာသည်။ တုံ့ပြန်ချက်အနေဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ပါဝင်ပတ်သက်သူများ၏ စိတ်ကူးများ စုဆောင်းခြင်းနှင့် ရေရှည်တည်တံ့သော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ကော်ပိုရိတ်တစ်ခုလုံးဆိုင်ရာ မျှော်မှန်းချက်နှင့် ဗျူဟာများ စီစဉ်သတ်မှတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်ကို တိုးမြှင့်လုပ်ဆောင်နေပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ရေရှည်တည်တံ့သော စီမံခန့်ခွဲရေး၏ အဓိကအချက်များအဖြစ် စီးပွားရေး၊ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာနှင့် လူမှုရေးဆိုင်ရာ တာဝန်များကို ချမှတ်ထားပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ပါဝင်ပတ်သက်သူများစွာကို ဆက်လက်၍ ခွဲခြားဖော်ပြရန်၊ ၎င်းတို့နှင့် အပြုသဘော ဆက်ဆံရေးများ တည်ဆောက်ရန်နှင့် ကုမ္ပဏီနှင့် ပါဝင်ပတ်သက်သူ နှစ်ဦးစလုံးအတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ တန်ဖိုးကို အဆုံးစွန်အထိ တိုးမြှင့်ရန် ကတိပြုထားသည်။
2020 ရေရှည်တည်တံ့ရေး သတင်းပေးပို့ချက်
2019 ရေရှည်တည်တံ့ရေး သတင်းပေးပို့ချက်
2018 ရေရှည်တည်တံ့ရေး သတင်းပေးပို့ချက်
2017 ရေရှည်တည်တံ့ရေး သတင်းပေးပို့ချက်
2016 ရေရှည်တည်တံ့ရေး သတင်းပေးပို့ချက်
2015 ရေရှည်တည်တံ့ရေး သတင်းပေးပို့ချက်
2014 ရေရှည်တည်တံ့ရေး သတင်းပေးပို့ချက်
2013 ရေရှည်တည်တံ့ရေး သတင်းပေးပို့ချက်
2012 ရေရှည်တည်တံ့ရေး သတင်းပေးပို့ချက်
2011 ရေရှည်တည်တံ့ရေး သတင်းပေးပို့ချက်
2010 ရေရှည်တည်တံ့ရေး သတင်းပေးပို့ချက်
2009 ရေရှည်တည်တံ့ရေး သတင်းပေးပို့ချက်
2008 ရေရှည်တည်တံ့ရေး သတင်းပေးပို့ချက်
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း စည်းကမ်း
Samsung Electronics သည် သာလွန်ကောင်းမွန်သော ထုတ်ကုန်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို ဖန်တီးရန် လူသားရင်းမြစ်နှင့် နည်းပညာကို မြှုပ်နှံအသုံးချခြင်းဖြင့် ပိုကောင်းသော ကမ္ဘာ့လူမှုအဖွဲ့ ဖြစ်လာရေးတွင် အထောက်အပြုရင်း ‘ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်း ကုမ္ပဏီ’ ဖြစ်လာရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။
ဤရည်ရွယ်ချက် ဖြစ်မြောက်လာစေရန် ကျွန်ုပ်တို့က 『လူအများ၊ ထူးချွန်မှု၊ ပြောင်းလဲမှု၊ ဂုဏ်သိက္ခာ၊ ပူးတွဲချမ်းသာကြွယ်ဝမှု』 ဆိုသည့် Samsung တန်ဖိုးများအပြင် ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်း ကုမ္ပဏီ၏ အချက်7ခုဖြစ်သည့် 『စိတ်ကူး၊ မျှော်မှန်းချက်နှင့် ရည်မှန်းချက်၊ ဖန်တီးမှုနှင့် စိန်ခေါ်မှု၊ အတွေးအမြင်နှင့် ကောင်းမွန်သော အသိစိတ်၊ နည်းပညာနှင့် အချက်အလက်၊ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့် အများလက်ခံနိုင်မှု၊ အမြန်နှုန်းနှင့် အလျင်၊ ပြောင်းလဲမှုနှင့် ဆန်းသစ်တီထွင်မှု』ကို အဖွဲ့အစည်းအတွင်း မျှဝေပြီး လက်ကိုင်ပြုထားပါသည်။
ထို့အပြင်၊ ဥပဒေများနှင့် ကျင့်ဝတ်ညီသော လုပ်ထုံးများကို လိုက်နာရန်အပြင် လူမှုရေး တာဝန်ယူမှုအတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ ခိုင်မာသော ကတိကို ဖော်ပြရန် Samsung Electronics ဝန်ထမ်းများသည် ဤ 「ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အလုပ်စည်းကမ်း」 အပြင် Samsung လုပ်ငန်း မူများကို လိုက်နာရပါမည်။ လုပ်ငန်း လုပ်ဆောင်မှုအားလုံးတွင် လုပ်ဆောင်ပုံစံနှုန်းများကို ဖော်ပြသည့် ဤ「ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အလုပ်စည်းကမ်း」 သည် Samsung Electronics ရှိ လူတိုင်းအတွက် လမ်းညွှန်စံနှုန်း ဖြစ်ပါမည်။
- ကျွန်ုပ်တို့သည် ဆန်းသစ်တီထွင်မှု မရှိဘဲ မရှင်သန်နိုင်ကြောင်း အရေးတကြီး ခံစားသိရှိမှုဖြင့်၊ လုပ်ငန်း ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သုံးစွဲသူ လိုအပ်ချက်တွင် ပြောင်းလဲမှုများကို အမြန်တုံ့ပြန်လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် အနာဂတ် ယှဉ်ပြိုင်မှုကို အောင်မြင်ရန်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ စိတ်ကူး၊ မျှော်မှန်းချက်နှင့် ရည်မှန်းချက်ပေါ် မူတည်၍ ပြောင်းလဲမှုနှင့် ဆန်းသစ်တီထွင်မှုအတွက် ရေရှည်တည်တံ့သော ကတိတစ်ခု ထားရှိရန် ကြိုးပမ်းအားထုတ်ပါသည်။
- အနာဂတ် ယှဉ်ပြိုင်နိုင်မှုက ပြိုင်ဘက်များထက်ဆောလျင်စွာ နည်းပညာနှင့် အချက်အလက် ဖန်တီးရေးသားနိုင်မှုအပေါ် မူတည်ကြောင်း အသိအမှတ်ပြုရင်း ကျွန်ုပ်တို့က ဖန်တီးမှုနှင့် စိန်ခေါ်မှုအတွက် စိတ်ခွန်အားပေးပါသည်။
- အနာဂတ်ကို ကြိုမြင်ရန် အတွေးအမြင်ဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ နယ်ပယ်အတွင်း အရည်အချင်းမီသော ကျွမ်းကျင်သူများ ဖြစ်လာရန် ဆန္ဒပြင်းပြနေပါသည်။
- တစ်ဦးချင်း၏ အပြန်အလှန် လေးစားမှုနှင့် ယုံကြည်မှုအပြင် အများလက်ခံနိုင်မှုပေါ် အခြေခံ၍ ပိုင်ရှင်ဆိုသည့် စိတ်ခံစားချက်ဖြင့် ဆုံးဖြတ်ချက်များ ချမှတ်ပြီး ကြိုတင်ပြင်ဆင်လုပ်ဆောင်ရန် ဝန်ထမ်းများကို တိုက်တွန်းအားပေးသည့် ပွင့်လင်းသော အစဉ်အလာတစ်ခုကို ဖန်တီးပါသည်။
- ရှယ်ယာရှင်များနှင့် စီးပွားရေး မိတ်ဖက်များနှင့် ယုံကြည်မှုရှိသော ဆက်ဆံရေးများကို ထိန်းသိမ်းထားခြင်းအပြင် အပြန်အလှန် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဖြင့် ယုံကြည်အားထားလောက်သော စီမံခန့်ခွဲရေးကို ပံ့ပိုးပေးခြင်းဖြင့် ပူးတွဲကြွယ်ဝချမ်းသာမှုကို လက်ကိုင်ပြုထားပါသည်။
※ လုပ်ငန်းစည်းကမ်း အကျုံးဝင်မှု- လုပ်ငန်းစည်းကမ်းသည် Samsung Electronics ၏ ဝန်ထမ်းများ၊ (ပြည်တွင်း/ပြည်ပ)၊ ပေးသွင်းသူများနှင့် Samsung Electronics ၏ လုပ်ငန်းခွဲများတွင် လုပ်ကိုင်နေသည့် ဝန်ထမ်းအားလုံးနှင့် သက်ဆိုင်ပါသည်။
မူ 1။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဥပဒေများနှင့် ကျင့်ဝတ်စံနှုန်းများကို လိုက်နာပါသည် Click to Expand
1-1. ကျွန်ုပ်တို့သည် လူတစ်ဦးချင်း၏ ဂုဏ်သိက္ခာနှင့် မတူကွဲပြားမှုကို လေးစားပါသည်
1 ကုမ္ပဏီသည် ဝန်ထမ်းအားလုံး၏ အခြေခံ လူ့အခွင့်အရေးများကို လေးစားပြီး ၎င်းတို့၏ အရာရှိများ၊ ဝန်ထမ်းနှင့် အခြား ပါဝင်ပတ်သက်သည့် လူများအား လူမျိုး၊ နိုင်ငံသား၊ လိင်၊ ဘာသာ၊ ဒေသန္တရနောက်ခံ၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ မသန်စွမ်းမှု၊ အိမ်ထောင်ရေး အခြေအနေ သို့မဟုတ် ဥပဒေအရ ကာကွယ်ထားသည့် အခြား ပင်ကိုလက္ခဏာများ အခြေခံပုံစံဖြင့် ခွဲခြားဆက်ဆံမည် မဟုတ်ပါ။
2 ကုမ္ပဏီသည် နိုင်ငံတကာ စံနှုန်းများနှင့် သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံရေး ဥပဒေများဖြင့် သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်း အသက်မပြည့်သူများကို အလုပ်မခန့်ပါ။
3 ကုမ္ပဏီသည် အပြန်အလှန် ယုံကြည်မှုနှင့် ဂုဏ်သိက္ခာရှိမှုတို့ပေါ် အခြေခံ၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သော လုပ်သား စီမံခန့်ခွဲရေး ဆက်ဆံမှုများကို ထိန်းသိမ်းပြီး ဖန်တီးရေးသားရန် အလို့ငှာ ကျွန်ုပ်တို့၏ အလုပ်ခွင်များ လည်ပတ်ဆောင်ရွက်သည့်နေရာတွင် ဒေသန္တရ အလုပ်သမား ဥပဒေများနှင့်အညီ လွတ်လပ်စွာ သင်းဖွဲ့ခွင့်နှင့် စုပေါင်းညှိနှိုင်းခွင့်ကို လေးစားပါမည်။
4 ကုမ္ပဏီသည် သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံတော်၊ ဒေသန္တရ သို့မဟုတ် ပြည်နယ် ဥပဒေများအပြင် နိုင်ငံတော် စံနှုန်းများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစား၍ ယုတ္တိတန်ပြီး မျှတသော ပုံစံဖြင့် ဝန်ထမ်းရေးရာအတွက် အလုပ်အကိုင်နှင့် နစ်နာကြေး သတ်မှတ်ချက်များကို ဆုံးဖြတ်ပါမည်။
5 ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် ဝန်ထမ်း၏ အလုပ်လုပ်ချိန်များသည် ၎င်းတို့၏ တာဝန်များ၏ သီးခြား သဘောသဘာဝအပြင် နိုင်ငံတော် ဥပဒေများနှင့် စည်းမျဉ်းများနှင့် အညီ ဖြစ်ပြီး နှစ်ဦးနှစ်ဖက် သဘောတူညီချက် မရှိဘဲ ထပ်တိုး အလုပ်လုပ်ချိန်များကို ပြဠာန်းနိုင်မည် မဟုတ်ကြောင်း သေချာလုပ်ဆောင်ပါမည်။
6 အထက်လူကြီးများသည် လက်အောက်ငယ်သားများအား ကုမ္ပဏီ စည်းမျဉ်းများနှင့် စံနှုန်းမီသော လုပ်ငန်းစဉ်များ ချိုးဖောက်သည့် ကုမ္ပဏီရေးရာများ သို့မဟုတ် တာဝန်များနှင့် မသက်ဆိုင်သည့် အလုပ်များ အတင်းမခိုင်းစေကြောင်း သို့မဟုတ် ဝန်ထမ်းများ၏ ပုံမှန် တာဝန်များ ထမ်းဆောင်မှုအပေါ် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခြိမ်းခြောက်မှု သို့မဟုတ် အကျပ်ကိုင်မှု ပုံစံတစ်ခုခုကို အသုံးမပြုကြောင်း သေချာစေရန် ကုမ္ပဏီက ကြိုးပမ်းအားထုတ်ပါမည်။
1-2. ကျွန်ုပ်တို့က ဥပဒေများနှင့် လုပ်ငန်း ကျင့်ဝတ်များနှင့်အညီ ပြိုင်ဆိုင်ပါသည်
1 ကုမ္ပဏီသည် နိုင်ငံတော် ဥပဒေများနှင့် စည်းမျဉ်းများအပြင် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအပေါ် လွှမ်းမိုးသည့် သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာ စံနှုန်းများကို လိုက်နာခြင်းဖြင့် ကမ္ဘာအနှံ့ရှိ ၎င်းတို့၏ လုပ်ငန်း နယ်ပယ်အားလုံးတွင် လွတ်လပ်စွာနှင့် မျှတစွာ ယှဉ်ပြိုင်ပါမည်။
2 ကုမ္ပဏီသည် အဓိကကျသော စျေးကွက်နေရာတစ်ခုကို တလွဲသုံးခြင်း သို့မဟုတ် အရောင်း လွှဲပြောင်းမှုများ (စာရိုက်ခြင်း) တွင် အလိုမရှိသော အရာများကို ထည့်သွင်းခြင်း ဖြစ်စေရန် အကျပ်ကိုင်မှု မပြုလုပ်ရပါ။
3 ကုမ္ပဏီသည် စျေးနှုန်းသတ်မှတ်ခြင်း၊ လေလံ ပူးပေါင်းလိမ်လည်ခြင်း၊ စျေးကွက် ပူးပေါင်းလိမ်လည်ခြင်း သို့မဟုတ် လျှော့ချထားသော ထုတ်လုပ်ရေး သဘောတူညီချက်များအတွက် ပြိုင်ဘက်များနှင့် ညှိနှိုင်းမည်မဟုတ်ဘဲ၊ စျေးနှုန်း အတည်ပြုမှု အပါအဝင် ပြိုင်ဘက် စျေးနှုန်းများ၊ လေလံများ၊ သုံးစွဲသူများ၊ အရောင်းနယ်မြေများနှင့် အခြေအနေများအတွက် ပြိုင်ဘက်များနှင့် ဆွေးနွေးမည်မဟုတ်ပါ။
4 ကုမ္ပဏီသည် သုံးစွဲသူများ သို့မဟုတ် ပြင်ပမှ ပါဝင်ပတ်သက်သူများထံမှ သို့မဟုတ် သို့ ငွေကြေး၊ ကုန်ပစ္စည်းများ၊ ဖျော်ဖြေရေး သို့မဟုတ် စီးပွားရေး အကျိုးခံစားချက်များ ပေးခြင်းကို ခွင့်ပြုမည် မဟုတ်ပါ သို့မဟုတ် ဥပဒေများနှင့် မျှတသော ရောင်းဝယ်ရေး မူများကို ချိုးဖောက်သည့် မမှန်မကန် လုပ်ဆောင်ချက်များ ခွင့်မပြုပါ။
5 ကုမ္ပဏီသည် ပြိုင်ဘက်များက ပိုင်ဆိုင်သော လျှို့ဝှက်အချက်အလက်များကို တရားမဝင် ရယူခြင်း မပြုပါ။
6 ကုမ္ပဏီသည် သုံးစွဲသူ သို့မဟုတ် မိတ်ဖက် ကုမ္ပဏီများ၏ အကျိုးစီးပွားကို ပျက်ပြားစေသော အကျိုးအမြတ် တစ်စုံတစ်ရာ ရယူရန် တောင်းဆိုခြင်း သို့မဟုတ် အကျပ်ကိုင်ခြင်း မပြုလုပ်ပါ။
1-3. လွှဲပြောင်းမှုများ၏ တိကျသော မှတ်တမ်းမှတ်ရာဖြင့် ငွေစာရင်းများကို ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ ထားရှိပါသည်
1 ကုမ္ပဏီသည် နိုင်ငံတကာ စံနှုန်းများနှင့် နိုင်ငံတော် စာရင်းအင်း စည်းမျဉ်းများနှင့်အညီ ငွေလွှဲမှုအားလုံးကို တိကျစွာ မှတ်တမ်းတင်ပြီး စီမံခန့်ခွဲကာ ပုံမှန် ကြားလပ်ချိန်များတွင် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ၏ ငွေစာရင်းစစ်မှုများကို လက်ခံသွားဖွယ်ရှိပါသည်။
2 ကုမ္ပဏီသည် မည်သူမည်ဝါ မသေချာသော သုံးစွဲသူများနှင့် စီးပွားရေး ဆက်ဆံမှု ပြုလုပ်ခြင်းမှ အစွမ်းကုန် ရှောင်ကြဉ်သွားမည် ဖြစ်ပြီး တရားမဝင်၊ မှားယွင်းသော သို့မဟုတ် ပုံမှန်မဟုတ်သော ငွေလွှဲမှုများတွင် ပါဝင်မည် မဟုတ်ပါ။
1-4. ကျွန်ုပ်တို့သည် နိုင်ငံရေးများတွင် မပါဝင်ဘဲ ကြားနေရေးဝါဒကို လက်ကိုင်ပါသည်
1 ကုမ္ပဏီသည် လူတစ်ဦးချင်း၏ နိုင်ငံရေး အခွင့်အရေးများနှင့် ထင်မြင်ချက် ဖော်ပြမှုကို လေးစားပါမည်။ သို့သော်၊ အဖွဲ့အစည်းအတွက် အန္တရာယ်ရှိနိုင်သော ကုမ္ပဏီအတွင်း နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုများ ဆောင်ရွက်ခြင်းကို ခွင့်မပြုပါ။
2 ငွေကြေး ရင်းမြစ်များ၊ ဝန်ထမ်းအင်အားနှင့် ပစ္စည်းကိရိယာများ အပါအဝင် ကုမ္ပဏီ၏ ရင်းမြစ်များကို နိုင်ငံရေး ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် အသုံးမပြုရပါ။
3 ကုမ္ပဏီသည် တရားမဝင် လှူဒါန်းမှုများနှင့် အစိုးရများနှင့် မလျော်ကန်သော ဆက်ဆံရေးများကို ရှောင်ကြဉ်ပြီး နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံစီ၏ သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေများနှင့် စည်းမျဉ်းများကို လေးစားပါမည်။
1-5. ကျွန်ုပ်တို့သည် လူအများနှင့် လုပ်ငန်း မိတ်ဖက်များ၏ အချက်အလက်များကို ကာကွယ်ပေးပါသည်
1 ကုမ္ပဏီသည် ဝန်ထမ်းများ၏ ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှုနှင့် လျှို့ဝှက်အချက်အလက် ကာကွယ်ရေးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဥပဒေများနှင့် စည်းမျဉ်းများအတိုင်း လုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်ပြီး ကုမ္ပဏီ၏ အရာရှိ သို့မဟုတ် ဝန်ထမ်းတစ်ဦးချင်းက အဆိုပါ အချက်အလက် ကာကွယ်ရေးအတွက် ၎င်းတို့၏ အခြေခံတာဝန်ကို အသိအမှတ်ပြုပါမည်။
2 ကုမ္ပဏီသည် ပုံမှန် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းစဉ်ဖြင့် ရယူထားသည့် လူအများ၊ ကော်ပိုရိတ် သုံးစွဲသူများ သို့မဟုတ် လုပ်ငန်း မိတ်ဖက်များနှင့် ဆက်စပ်သော အချက်အလက်များကို စီးပွားရေး ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်သာ အသုံးပြုမည်ဖြစ်ပြီး အဆိုပါ အချက်အလက်များကို ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများထံ ထုတ်ပေးမည် မဟုတ်ပါ။
မူ 2. ကျွန်ုပ်တို့က သန့်ရှင်းသော အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ အစဉ်အလာကို ထိန်းသိမ်းထားပါသည် Click to Expand
2-1. ကျွန်ုပ်တို့၏ တာဝန်များတွင် အများဆိုင်နှင့် ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ကဏ္ဍများကြား တင်းကျပ်သော ခွဲခြားမှု ထားရှိပါသည်
1 ကုမ္ပဏီသည် ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အကျိုးအမြတ်အတွက် သို့မဟုတ် ကော်ပိုရိတ် အဖိုးတန်ပစ္စည်းများ အလွဲသုံးစားလုပ်မှုအတွက် တစ်ဦးတစ်ယောက်၏ ရာထူးကို အသုံးပြု၍ ပုံမှန်မဟုတ်သော အသုံးစရိတ် ကျသင့်စေမှုကဲ့သို့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အကျိုးအမြတ် ရယူမှုအတွက် တရားမဝင်သော လုပ်ဆောင်ချက်ကို ခွင့်မပြုပါ။
2 ကုမ္ပဏီသည် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအကျိုးအမြတ်အတွက် ဥပမာ၊ အတွင်းလူ ကုန်သွယ်မှုအတွက် ကုမ္ပဏီ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို အသုံးချသည့် လုပ်ဆောင်ချက်ကို လုပ်ဆောင်သူမှာ တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်သော ဝန်ထမ်းဖြစ်စေ သို့မဟုတ် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းဖြစ်စေ ခွင့်ပြုမည် မဟုတ်ပါ။
3 ကုမ္ပဏီနှင့် လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းကြား အကျိုးစီးပွားဆိုင်ရာ ပဋိပက္ခ ဖြစ်သည့်အခါ၊ ကုမ္ပဏီ၏ တရားဝင် အကျိုးစီးပွားကို ဦးစားပေးအဖြစ် ထည့်စဉ်းစားသွားပါမည်။
2-2. ကျွန်ုပ်တို့က ကုမ္ပဏီနှင့် အခြားလူများ၏ အသိဉာဏပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှုများကို ကာကွယ်ပေးပြီး လေးစားပါသည်
1 ကုမ္ပဏီသည် ကြိုတင် ခွင့်ပြုချက်နှင့် သဘောတူညီချက် မရှိဘဲ ကုမ္ပဏီတွင်း အသိဉာဏပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် လျှို့ဝှက်အချက်အလက်တို့ကို ၎င်းတို့၏ ဝန်ထမ်းများက ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများထံ ထုတ်ပေးမည်မဟုတ်ကြောင်း သေချာစေရန် ကြိုးပမ်းအားထုတ်သွားပါမည်။
2 ကုမ္ပဏီသည် ၎င်း၏လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်မှုများမှတဆင့် ရရှိခဲ့သည့် ပိုင်ဆိုင်မှုဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို အသိဉာဏပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှု အဖြစ် မှတ်တမ်းတင်ကာ လုံခြုံစွာ သိမ်းဆည်းပြီး စီမံခန့်ခွဲထားစေရန် သေချာလုပ်ဆောင်ပါမည်။
3 ကုမ္ပဏီသည် မှတ်ပုံတင်မူပိုင်များ၊ မူပိုင်ခွင့်များနှင့် ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များကဲ့သို့ ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ၏ အသိဉာဏပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှု အခွင့်အရေးများကို လေးစားပြီး အဆိုပါ အသိဉာဏ ပစ္စည်းကို ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ ထိပါး သို့မဟုတ် မလျော်ကန်စွာ အသုံးပြုခြင်း မပြုလုပ်ပါ။
4 ကုမ္ပဏီသည် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများနှင့် တယ်လီဖုန်း သို့မဟုတ် အခြားဆက်သွယ်ပြောဆိုရေး ဆောင်ရွက်မှုအတွင်းနှင့် ဒေတာသိုလှောင်ခန်း အလုပ်ရုံ အမျိုးမျိုး၏ စီမံခန့်ခွဲရေးတွင် ၎င်း၏ အသိဉာဏပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှုများ လုံခြုံရေးအတွက် လိုအပ်သော အလေးထားမှုကို သေချာထားရှိပါမည်။
2-3. ကျွန်ုပ်တို့က ယုံကြည်ရသော ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ဝန်းကျင်စရိုက်ကို ဖန်တီးပါသည်
1 ကုမ္ပဏီသည် လိင်ပိုင်းနှောင့်ယှက်မှု၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စော်ကားမှု သော်လည်းကောင်း တခြား ပုဂ္ဂိုလ်ရေး တောင်းဆိုမှု သော်လည်းကောင်း ဝန်ထမ်းနောက်တစ်ဦးကို ထိခိုက်စေမည့် သို့မဟုတ် အဆင်မပြေဖြစ်စေမည့် လုပ်ရပ်ကဲ့သို့ သောအခြား ဝန်ထမ်းများကို စိတ်အနှောင့်အယှက်ပေးသည့် သို့မဟုတ် အဆင်မပြေမှု ဖြစ်စေသည့် အပြုအမူ ပုံစံတစ်မျိုးမျိုးကို လုံးဝသည်းမခံပါ။
2 ကုမ္ပဏီသည် ဝန်ထမ်းအားလုံးကို တန်းတူညီသော အခွင့်အရေးပေးသည့် အလုပ်ခွင်တစ်ခု ဖန်တီးပေးရန် ၎င်း၏ တာဝန်ကို အသိအမှတ်ပြုပြီး ဤကတိပြုမှုကို အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သည့် ကုမ္ပဏီအတွင်း ဂိုဏ်းကွဲမှု သို့မဟုတ် သီးသန့်အုပ်စု ဖွဲ့စည်းမှုကို ခွင့်ပြုမည် မဟုတ်ပါ။
3 ကုမ္ပဏီသည် အပြန်အလှန် အကျိုးပြုသော ရပ်တည်မှုနှင့် ကြွယ်ဝမှုဆိုသည့် မူပေါ် အခြေခံ၍ စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် ဝန်ထမ်းများကြား အပြန်အလှန် ပူးပေါင်းပါဝင်သော ဆက်ဆံရေးကို ထိန်းသိမ်းပြီး တိုးတက်ပြောင်းလဲရန် အားထုတ်ကြိုးပမ်းပါမည်။
2-4. ကျွန်ုပ်တို့၏ ပြင်ပလုပ်ဆောင်ချက်များတွင် Samsung Electronics ၏ ဂုဏ်သိက္ခာကို ကျွန်ုပ်တို့ ထိန်းသိမ်းလိုက်နာပါသည်။
1 ကုမ္ပဏီရှိ အလုပ်အကိုင် သက်တမ်းအတွင်း ပြင်ပအဖွဲ့နှင့် တစ်ပြိုင်နက် အလုပ်အကိုင် လုပ်ကိုင်ရန် သို့မဟုတ် တစ်နည်းအားဖြင့် ကြိုတင် ခွင့်ပြုချက် မရှိဘဲ ပြင်ပ စီးပွားရေး လုပ်ဆောင်မှုများတွင် ပါဝင်ရန် ဝန်ထမ်းအား ခွင့်မပြုပါ။
2 ကုမ္ပဏီသည် ပြင်ပ ပို့ချမှုများ သို့မဟုတ် အင်တာဗျူးများတွင် ကုမ္ပဏီ အချက်အလက် ထုတ်ဖော်မှုအားလုံးမှာ ကြိုတင် စိစစ်မှုနှင့် အတည်ပြုချက် လိုအပ်ကြောင်း သတ်မှတ်ပြဠာန်းထားပါသည်။
3ကုမ္ပဏီသည် ၎င်း၏ အရာရှိများနှင့် ဝန်ထမ်းများ ရုံးခန်းတွင် ရှိနေစဉ် အကျိုးစီးပွား ပဋိပက္ခရှိသော ကုမ္ပဏီဘုတ်အဖွဲ့ဝင်များအဖြစ် ပြုမူရန် သို့မဟုတ် ယှဉ်ပြိုင်မှုရှိသော လုပ်ငန်း လုပ်ဆောင်မှုများတွင် ပါဝင်ရန် ခွင့်ပြုမည် မဟုတ်ပါ။
မူ 3. ကျွန်ုပ်တို့က သုံးစွဲသူများ၊ ရှယ်ယာရှင်များနှင့် ဝန်ထမ်းများကို လေးစားပါသည် Click to Expand
3-1. ကျွန်ုပ်တို့သည် စီမံခန့်ခွဲရေး လုပ်ဆောင်ချက်များတွင် သုံးစွဲသူ စိတ်ကျေနပ်ရေးကို ဦးစားပေးပါသည်
1 ကုမ္ပဏီသည် ထုတ်ကုန် ဒီဇိုင်း၊ ဖြန့်ချိမှုနှင့် ဝန်ဆောင်မှု တိုးတက်ရေးအတွက် သုံးစွဲသူများ၏ သတ်မှတ်ချက်များနှင့် အကြံပြုချက်များအတိုင်း ဖော်ဆောင်ရန်နှင့် ဦးစားပေးလုပ်ဆောင်ရန် မပြတ်ကြိုးပမ်းသွားပါမည်။
2 ကုမ္ပဏီသည် "Samsung Electronics ရှိနေရခြင်းက သုံးစွဲသူများကြောင့်ပါ" ဆိုသည့် ၎င်းတို့၏ ယုံကြည်ချက်အပေါ် အခြေခံ၍ ယဉ်ကျေးပြီး တန်းတူညီသော ပုံစံဖြင့် သုံးစွဲသူများနှင့် ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်သလို ကြိုးပမ်းမှု ပြုလုပ်သွားပါမည်။
3 ကုမ္ပဏီသည် သုံးစွဲသူများအား ထုတ်ကုန် အရည်အသွေး၊ လုပ်ဆောင်ချက်နှင့် အသေးစိတ်အချက်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ သုံးစွဲသူများကိုလှည့်စားနိုင်သည့် ချဲ့ကားပြောဆိုသော ကြော်ငြာများ သို့မဟုတ် အကျပ်ကိုင်သော နည်းစနစ်များကို ရှောင်ကြဉ်ခြင်းဖြင့် သုံးစွဲသူ၏ ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ကို လေးစားပါမည်။
4 ကုမ္ပဏီသည် သုံးစွဲသူဆိုင်ရာ အငြင်းပွားမှုများ၏ မျှတသော ဆုံးဖြတ်ချက် ပြည့်မီစေရန် အားထုတ်ကြိုးပမ်းသွားမည်ဖြစ်ပြီး ပွင့်လင်းမြင်သာပြီး အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီဖြစ်ကာ ထိရောက်မှုရှိသော ပုံစံဖြင့် သုံးစွဲသူများ၏ တိုင်ကြားချက်များကို တုံ့ပြန်သွားပါမည်။
3-2. ကျွန်ုပ်တို့က ရှယ်ယာရှင် တန်ဖိုးအပေါ် အလေးထားသည့် စီမံခန့်ခွဲရေးကို လက်ကိုင်ပြုပါသည်
1 ကုမ္ပဏီသည် ပွင့်လင်းမြင်သာပြီး အားထား ယုံကြည် လောက်သော စီမံခန့်ခွဲရေးဖြင့် အကျိုးအမြတ်များကို အများဆုံးမြှင့်တင်ခြင်းဖြင့် ရှယ်ယာရှင်များအတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ် အမြတ် တိုးပွားလာရေးကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပါမည်။
2 ကုမ္ပဏီသည် စိတ်ရင်းစေတနာမှန်ဖြင့် အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ အဓိက ငွေကြေးနှင့် ကော်ပိုရိတ် အချက်အလက်ကို ကြေညာခြင်းဖြင့် ရှယ်ယာရှင်များနှင့် ပတ်သက်မှုရှိသော အဖွဲ့များထံ ၎င်းတို့၏ တာဝန်ကို လိုက်နာစောင့်ထိန်းပါမည်။
3 ကုမ္ပဏီသည် ပြင်ပပါဝင်ပတ်သက်သူများထံမှ တရားဝင် အသနားခံစာများကို လက်ခံပြီး ရိုးသားစွာ ထည့်သွင်းစဉ်းစားသွားပါမည်။
3-3. ကျွန်ုပ်တို့ ဝန်ထမ်းများ၏ ဘဝအရည်အသွေးကို တိုးတက်စေရန် အားထုတ်ကြိုးပမ်းသွားပါမည်
1 ကုမ္ပဏီသည် ဝန်ထမ်းအားလုံးအတွက် တန်းတူညီသော အခွင့်အလမ်းများ ပေးအပ်ပြီး ၎င်းတို့၏ လုပ်နိုင်စွမ်းနှင့် ပြီးမြောက်မှုအပေါ် အခြေခံ၍ မျှတစွာ ဆက်ဆံပါမည်။
2 ကုမ္ပဏီသည် ဝန်ထမ်းများ၏ စဉ်ဆက်မပြတ် တိုးတက်ရေးကို တိုက်တွန်းအားပေးပြီး ၎င်းတို့၏ တာဝန်များ ဆောင်ရွက်ရန် ၎င်းတို့၏ လုပ်နိုင်စွမ်းများ တိုးတက်စေမည့် အခွင့်အလမ်းများကို တက်ကြွစွာ ပံ့ပိုးသွားပါမည်။
3 ကုမ္ပဏီသည် တစ်ဦးချင်း၏ ပင်ကို အရည်အချင်းနှင့် ဖန်တီးနိုင်စွမ်းကို တိုက်တွန်းအားပေးသည့် အလုပ်ပတ်ဝန်းကျင်ကို စီစဉ်ပေးသွားပါမည်။
မူ 4. ကျွန်ုပ်တို့က ပတ်ဝန်းကျင်၊ ကျန်းမာရေးနှင့် ဘေးကင်းရေးအတွက် ဂရုစိုက်ပါသည် Click to Expand
4-1. ကျွန်ုပ်တို့က ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ကိုက်ညီသော စီမံခန့်ခွဲရေးကို လက်ကိုင်ပြုပါသည်
1 ကုမ္ပဏီသည် ၎င်းတို့၏ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်မှုများအတွင်း ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ကုမ္ပဏီတွင်း ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများနှင် စပ်လျဉ်း၍ နိုင်ငံတကာ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ စံနှုန်းများ၊ နိုင်ငံတော် ဥပဒေများနှင့် စည်းမျဉ်းများကို လိုက်နာရန် အစွမ်းကုန် ကြိုးပမ်းသွားပါမည်။
2 ကုမ္ပဏီသည် အန္တရာယ်များသော ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်မှုကို လျှော့ချရန်၊ ရင်းမြစ်များကို အကျိုးရှိစွာ အသုံးချရန်နှင့် ပတ်ဝန်းကျင် အကျိုးစီးပွားအတွက် စွန့်ပစ် ထုတ်ကုန်များကို ပြန်လည်အသုံးချရန် တက်ကြွစွာ ကြိုးပမ်းသွားပါမည်။
3 ကုမ္ပဏီသည် ထုတ်ကုန် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ ကုန်ထုတ်လုပ်ရေး၊ ဖြန့်ချိမှု၊ အရောင်းနှင့် စွန့်ပစ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးတွင် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ တိုးတက်ရေး လုပ်ဆောင်ချက်များ ဆောင်ရွက်ရန် အကောင်းဆုံး ကြိုးပမ်းသွားပါမည်။
4-2. ကျွန်ုပ်တို့က လူသားများ၏ ကျန်းမာရေးနှင့် ဘေးကင်းရေးကို တန်ဖိုးထားပါသည်
1 Tကုမ္ပဏီသည် ဘေးကင်းသော အသိပညာပေးရေးနှင့် သင်တန်းကို ပံ့ပိုးပေးခြင်းဖြင့် ပုံမှန် ကြားကာလများတွင် ၎င်း၏ ဝန်ထမ်းများ၏ ဘေးကင်းရေးနှင့် ကျန်းမာရေးကို လွှမ်းမိုးသော နိုင်ငံတကာ စံနှုန်းများ၊ သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေများနှင့် စည်းမျဉ်းများအပြင် ပြည်တွင်း စည်းမျဉ်းများကို လေးစားလိုက်နာပါမည်။
2 ကုမ္ပဏီသည် ထုတ်ကုန် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ ထုတ်လုပ်ရေး၊ ဖြန့်ချိရေးနှင့် အရောင်း အပါအဝင် လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ချက် အားလုံးတွင် သုံးစွဲသူများ၏ ကျန်းမာရေးနှင့် ဘေးကင်းရေးအတွက် ဦးစားပေး ထည့်သွင်းစဉ်းစားမှု ပြူလုပ်ပါမည်။
3 ကုမ္ပဏီသည် ၎င်းတို့၏ ထုတ်ကုန်များ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများ၏ ဘေးကင်းသော သုံးစွဲမှုနှင့် လုပ်ဆောင်မှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ သုံးစွဲသူများကို ရှင်းလင်းစွာ အသိပေးပါမည်။
4 ကုမ္ပဏီသည် သုံးစွဲသူများ၏ ဘေးကင်းရေးကို အန္တရာယ်ဖြစ်စေမည့် ထုတ်ကုန်တွင်း ချွတ်ယွင်းမှု စူးစမ်းရှာဖွေရေးကို ချက်ချင်း ဖြေရှင်းသွားရန် မပြတ်အားထုတ်ကြိုးပမ်းပါမည်။
5 ကုမ္ပဏီသည် ၎င်း၏ လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုခုတွင် မြင်တွေ့နိုင်သည့် ဘေးကင်းရေး အန္တရာယ်ကို ဖော်ထုတ်ပြီး ဖယ်ရှားရန် အလုံးစုံ ကြိုးပမ်းမှု ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်၍ ရှင်းလင်းပြီး ဘေးကင်းသော ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုကို ထိန်းသိမ်းထားရှိပါမည်။
မူ 5. ကျွန်ုပ်တို့က လူမှုရေးအရ တာဝန်ယူမှုရှိသော ကော်ပိုရိတ် နိုင်ငံသား ဖြစ်ပါသည် Click to Expand
5-1. ကော်ပိုရိတ်နိုင်ငံသားတစ်ဦးအဖြစ် ကျွန်ုပ်တို့၏ အခြေခံ တာဝန်များကို ရိုးသားစွာ လိုက်နာဆောင်ရွက်ပါသည်
1 ကုမ္ပဏီသည် တည်မြဲသော အလုပ်အကိုင် ဖန်တီးရန်နှင့် ၎င်း၏ အခွန် တာဝန်များကို သစ္စာရှိစွဲ ဖြည့်ဆည်းရန် အားထုတ်ကြိုးပမ်းသွားပါမည်။
2 ကုမ္ပဏီသည် ဝန်ထမ်း၏ အပြုအမူက ကုမ္ပဏီ၏ ပုံရိပ်အပေါ် တိုက်ရိုက် ထင်ဟပ်စေသည်ဆိုသည့် ၎င်းတို့၏ ယုံကြည်မှုကို ဝန်ထမ်းများ၏ စိတ်တွင် ထည့်သွင်းထားစေလိုပြီး စနစ်ကျသော ဝတ်ဆင်ပုံ၊ ယဉ်ကျေးပျူငှာသော အပြုအမူနှင့် ဂုဏ်သိက္ခာရှိသော စကားလုံးအသုံးပြုမှုတို့ကို သေချာစေခြင်းဖြင့် ကုမ္ပဏီ၏ နာမည်ကောင်းကို ထိန်းသိမ်းထားရန် ကြိုးပမ်းအားထုတ်ပါသည်။
3 ဝန်ထမ်းများအား ၎င်းတို့၏ တာဝန်များနှင့် ဝတ္တရားများကို ပြည့်မီအောင် လုပ်ကိုင်ခြင်းဖြင့် ဒေသန္တရ အသိုင်းအဝိုင်း၌ ယုံကြည်မှု တည်ဆောက်ရန် ကြိုးပမ်းထားထုတ်သွားဖို့ တိုက်တွန်းပါသည်။
5-2. ကျွန်ုပ်တို့က ဒေသန္တရ အသိုက်အဝန်းများ၏ လူမှုရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှု တန်ဖိုးများကို လေးစားပြီး ယှဉ်တွဲနေထိုင်မှုကို လက်ခံကျင့်သုံးပါသည်
1 ကုမ္ပဏီသည် ၎င်းတို့လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်သည့် ဒေသန္တရ ရပ်ရွာများ၏ ဥပဒေများ၊ ယဉ်ကျေးမှုနှင့် တန်ဖိုးများကို လေးစားပြီး ဒေသန္တရတွင်း နေထိုင်သူများ၏ ဘဝအရည်အသွေး တိုးတက်ရေးအတွက် ဖြည့်ဆည်းပေးသွားပါမည်။
2 ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ကော်ပိုရိတ် နိုင်ငံသားအဖြစ် ကုမ္ပဏီသည် ပညာရေးဆိုင်ရာ တိုးတက်လုပ်ဆောင်မှု၊ အနုပညာ၊ ယဉ်ကျေးမှုနှင့် အားကစား ကဲ့သို့ လူထုစိတ်ဝင်စားသည့် လှုပ်ရှားမှုများကို အားပေးထောက်ခံခြင်းနှင့် ပံ့ပိုးကူညီခြင်းဖြင့် လူမှုအဖွဲ့အစည်း၏ စိတ်ဓာတ်ပိုင်း ကြွယ်ဝချမ်းသာမှုကို ဖြည့်ဆည်းပေးသွားပါမည်။
3 ကုမ္ပဏီသည် စေတနာ့ဝန်ထမ်း လှုပ်ရှားမှုများနှင့် ကပ်ဘေး ကယ်ဆယ်ရေးကဲ့သို့ လူမှုရေး ဝန်ဆောင်မှုများတွင် တက်ကြွစွာ ပါဝင်ပါမည်။
5-3. ကျွန်ုပ်တို့က လုပ်ငန်းမိတ်ဖက်များနှင့်အတူ ယှဉ်တွဲနေထိုင်မှုနှင့် ယှဉ်တွဲကြွယ်ဝမှုဆိုသည့် ဆက်ဆံရေးများကို တည်ဆောက်ပါသည်
1 ကုမ္ပဏီသည် ၎င်းတို့၏ မိတ်ဖက်များကို အပြန်အလှန် ယုံကြည်မှုအပေါ် မူတည်၍ မဟာဗျူဟာမြောက် မိတ်ဖက်များဟု အသိအမှတ်ပြုပြီး သုံးစွဲသူ စိတ်ကျေနပ်ရေးအတွက် မျှဝေထားသော တန်ဖိုးကို လက်ကိုင်ပြုသွားပါမည်။
2 ကုမ္ပဏီသည် ခွဲခြားဆက်ဆံမှု မရှိဘဲ မျှတသော စံနှုန်းများကို အသုံးချခြင်းဖြင့် လုပ်ငန်းမိတ်ဖက်များကို လုပ်ငန်း ရည်ရွယ်ချက်များနှင့်အညီ ရွေးချယ်သွားပါမည်။
3 ကုမ္ပဏီသည် လုပ်ငန်းမိတ်ဖက်များ၏ ပြိုင်ဆိုင်မှု တိုးတက်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို ပံ့ပိုးရန် ကြိုးပမ်းလုပ်ဆောင်သွားမည်။
4 ကုမ္ပဏီသည် အလုပ်ခွင်တွင်း ဘေးကင်းရေးအပြင် ၎င်းတို့၏ ဝန်ထမ်းများ၏ တစ်ဦးချင်း အခွင့်အရေးများစပ်လျဉ်း၍ လုပ်ငန်းမိတ်ဖက်များ၏ ကိုယ်ပိုင် လူမှုရေး တာဝန်များ ဖြည့်ဆည်းလုပ်ဆောင်မှုကို တက်ကြွစွာ တိုက်တွန်းအားပေးပါသည်။
ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ စည်းကမ်းများနှင့် လမ်းညွှန်ချက်များ
ပတ်ဝန်းကျင်၊ ကျန်းမာရေးနှင့် ဘေးကင်းမှု မူဝါဒ
ဒေသအလိုက် စွန့်ပစ်ထုတ်ကုန် စုစည်းမှုစနစ်
WEEE ၏ မှန်ကန်သောစွန့်ပစ်မှု
ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်အောင် လုပ်ဆောင်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှု မိတ်ဖက်များအတွက် လိုအပ်ချက်များ
ဂေဟဒီဇိုင်းနှင့် စွမ်းအင် အညွှန်း
ပေးသွင်းသူ လုပ်ငန်းစည်းကမ်း လမ်းညွှန်
တာဝန်သိသော သတ္တုပစ္စည်းများ သတင်းပေးပို့မှု
မကြာသေးမီက နှစ်များအတွင်း၊ ပဋိပက္ခရှိပြီး အန္တရာယ်များသော နယ်မြေများတွင် သတ္တုပစ္စည်း တူးဖော်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ စဉ်ဆက်မပြတ်သော ပြဿနာများစွာ ရှိပါသည်၊ သို့ဖြစ်ပါ၍ ပါဝင်ပတ်သက်သူများသည် ကုမ္ပဏီများ၏ “တာဝန်သိသော ရယူခြင်း” ကို သတ်မှတ်ပြဠာန်းထားပါသည်။ Samsung ၏ ထုတ်ကုန်များတွင် အီလက်ထရွန်နစ်ပစ္စည်းများ၏ ပင်ကိုလက္ခဏာများကို သေချာစေရန် တန္တလမ်၊ သံဖြူ၊ အဖြိုက်နက်၊ ရွှေနှင့် ကိုဗော့ကဲ့သို့ သတ္တုပစ္စည်းများ ပါဝင်သည့် အစိတ်အပိုင်းငယ် မျိုးစုံးကို အသုံးပြုပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍၊ သတ္တုတူးဖော်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုများနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ဆုတ်ယုတ်လာခြင်းကဲ့သို့ လူမှုရေးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်တွင် အပျက်သဘော ထိခိုက်မှုများကို လျှော့ချရန် အစွမ်းကုန်ကြိုးပမ်းသွားပြီး ဤသတင်းပေးပို့ချက်ဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကြိုးပမ်းမှုများကို ထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုပါသည်။
Samsung Electronics တာဝန်သိသော တွင်းထွက်ပစ္စည်းများ သတင်းပေးပို့ချက်
အခွန် အန္တရာယ် စီမံခန့်ခွဲရေး မူဝါဒ